Malunga Nathi-Ningbo Futur Technology Co., Ltd
UZInzo & UNENEMBEKO
Kwi-Futur, asijongi abathengi abaninzi nangakumbi, kodwa intsebenziswano kumashumi eminyaka ezayo;
KwaFutur, asijonganga ishishini elinye, kodwa intsebenziswano ebanzi nenzulu.
Uninzi lweemveliso zethu ziyilwe kwaye zenziwe kumzi-mveliso wethu phantsi komgangatho we-ISO kunye nenkqubo yolawulo lokusingqongileyo.Ngeli xesha, iqela lethu lekhonkco lokubonelela lisebenza ngokuchanekileyo ekuqinisekiseni uzinzo lomgangatho mihla le.
Asiboneleli ngeemveliso kuphela, kodwa sikwanazo nezisombululo ezipheleleyo zokupakisha kubathengi bethu.
I-FUTUR yintshayelelo kunye nomvelisi okhokelayo wezisombululo zokupakishwa kokutya ezizinzileyo ezenziwe kwizinto ezinokuphinda zisetyenziswe ukuya kwizinto ezixutywayo, kunye noluhlu lweemveliso ukusuka kwi-cutlery ukuya kwizikhongozeli ezithathayo kuzo zonke iinkonzo zokutya kunye nezicelo zokuthengisa.
I-FUTUR yinkampani ye-vision-drive, igxininise ekuphuhliseni ukupakishwa okuzinzileyo kwishishini lokutya ukwenza uqoqosho lwesetyhula kunye nokudala ubomi obuluhlaza ekugqibeleni.
Ngeemveliso ezisemgangathweni, ixabiso elinoxanduva kunye neengcali, sinokuba liqabane lakho elithembekileyo nelide.
ABATHENGISI NGAMANDLA NABASABALI
Ngokusebenzisa ulwazi lwethu lweshishini, izisombululo ezitsha kunye nobuchule bokuthengisa, sinokukunceda ufumane isabelo sentengiso kwaye ukhulise ishishini lakho.Imveliso yethu kunye nokusebenza kakuhle kwekhonkco iqinisekisa ukuba uhlala unezona zisombululo zixabisa kakhulu.Xa usebenzisana ne-Futur ufumana izibonelelo zokunxulumana nenkampani into efanayo nokuzinza, umgangatho kunye nenkonzo yabathengi ekhethekileyo.
Umzi-mveliso okhokelayo abaqhotsa ikofu bakhetha i-Futur njengomthengisi wekomityi abayithandayo.Sithatha inkathazo kwiimfuno zakho zekomityi yephepha kwaye silawula yonke inkqubo ukusuka kuyilo kunye nemveliso yonke indlela ukuya kulawulo lwe-inventory kunye nokusabalalisa.Unokuqiniseka ngesiqinisekiso sethu sokuba AWUSOZE uphelelwe sisitokhwe.
IZITOLO EZINKULU ZOKUTSHA
Ngokusebenzisa ulwazi lweshishini lethu, izisombululo ezitsha kunye nobuchule bokuthengisa, sinokukunceda uyila ukupakishwa okufanelekileyo okanye wenze ipakethe kwiimfuno zakho ezithile ngexabiso elifikelelekayo.Imveliso yethu kunye nokusebenza kakuhle kwekhonkco iqinisekisa ukuba uhlala ufumana iimveliso ngobuninzi obufunekayo kwaye ngexesha.Xa usebenzisana ne-Futur ufumana izibonelelo zokunxulumana nenkampani into efanayo nokuzinza, umgangatho kunye nenkonzo yabathengi ekhethekileyo.